Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle netofotofo ya - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle netofotofo ya
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMercedes Zarami
UMercedes Zarami yi-Superhost
Iflethi inazo zonke iinkonzo ezisisiseko kwaye ikwisakhiwo esitsha, kukho isityalo sombane kwaye akukho ngxaki yamanzi. Ikufutshane kakhulu ne-Bolívar Norte de Valencia kunye ne-Andrés Eloy Blanco. Ikufutshane neC.C. Shopping Centre, iFernando Peñalver Park, iimarike, amayeza, iivenkile zezixhobo, iivenkile ngokubanzi. Iflethi inesixhobo se-Wi-Fi esiphathwayo, esimele sihlaziywe ngokwendlela esetyenziswa ngayo.
Iflethi inendawo eyi-42 m2 esasazwe kakuhle kakhulu. Inegumbi lokulala elinye elinendawo yokuhlambela kunye nekhabhathi enkulu, i-TV kunye nenkonzo ye-Directv. Igumbi lokutyela linefenitshala enezihlalo ezimbini, ii-puffs ezintathu kunye netafile yekofu. Indawo yasekhitshini inegumbi lesidlo sakusasa elinezitulo ezimbini eziphezulu, ifriji, isinki nezinye izinto zasekhitshini (umatshini wokwenza ikofu, izitya, iiglasi, iimbiza, i-blender, phakathi kwezinye).
Ayibafanelanga abantwana neentsana. Akukho zilwanyana zasekhaya. Akutshaywa. Akukho matheko okanye micimbi.
Umbuki zindwendwe ngu- Mercedes Zarami
Undwendwe luza kukwazi ukuqhagamshelana nombuki zindwendwe ngefowuni xa kuyimfuneko. Ixesha lokungena ngu-3:00 ebusuku ukuya ku-7: 00 ebusuku nexesha lokuphuma ngu-12: 00 ebusuku. Kodwa ke, ukuba iflethi okanye indlu ekwicomplex iyafumaneka, ixesha lokufika linokulungiswa ngaphambi ko-3:00 emva kwemini
Undwendwe luza kukwazi ukuqhagamshelana nombuki zindwendwe ngefowuni xa kuyimfuneko. Ixesha lokungena ngu-3:00 ebusuku ukuya ku-7: 00 ebusuku nexesha lokuphuma ngu-12: 00 ebusuku.…